गोरखामा ११ वर्षकी बालिका बिरामी परेपछि खोल्यो नसोचेको रहस्य आफ्नै बुबा र काकाले….
गोरखा : पालुङ्टार नगरपालिका वडा नं. ८ की एक बालिकालाई आफ्नै बुबा र काकाले बारम्बार क र णी गरी बिरामी बनाएको आरोप लागेको छ। ११ वर्षकी बालिकालाई ३७ वर्षका बुबा र काकाले क’र’णी’ग’रे’को आरोप लागेको हो।
पटक-पटक क’र’णी’को ‘शि’का’र बनेपछि पाठेघरको बिरामी बनेकी उनले गत असार २७ गते थापाथली अस्पतालमा उपचारको क्रममा फुपूसमक्ष सो रहस्य खोलेकी प्रहरीले जनाएको छ।
श्रीमती परपुरुषसँग बिहे गरी गएपछि एक्लिएका बुबाले आफूलाई घरभित्रै बारम्बार ज ब र्ज स्ती क र णी ग र्ने गरेको उपचारको क्रममा उनले फुपूलाई बताएकी थिइन्। साथै काकाले समेत गत कात्तिक महिनामा आफूलाई क’र’णी’ग’रे’को उनले फुपूलाई बताएकी थिइन्।
छोरीलाई क’र’णी ग’रे’को आरोपमा पीडितकी फुपूले आफ्ना दाजु र भाइ दुवैजनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए। सोही जाहेरीको आधारमा प्रहरीले मेखराज र लीलाकान्तलाई गत शुक्रबार पक्राउ गरेको छ।
उनीहरु वि’रु’द्ध ज’बर्ज’स्ती क’र’णीको शीर्षकमा मु’द्धा दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको डिएसपी दाहालले जानकारी दिए।
२०७८ श्रावण २५, सोमबार ०७:४१ 1 Minute 260 Views